चिप र जोआना गेनेस उनीहरूको प्रख्यात 'फिक्सर अपर' फार्महाउस बेच्छन् - समाचार
मुख्य मनोरञ्जन सेलेब्स समाचार शैली
चिप र जोआना गेनेस उनीहरूको प्रख्यात 'फिक्सर अपर' फार्महाउस बेच्छन्
घर मीठो घर छैन।
गत महिनाको अन्ततिर, 'फिक्सर अपर' दम्पती चिप र जोआना गैनेसले घोषणा गरे कि उनीहरूले HGTV कार्यक्रम समाप्त गर्दै थिए। अब शब्द आउँछ कि उनीहरूले आफ्नो प्यारो फार्म हाउस बेचेका छन्, जुन उनीहरूको शोको लगभग हरेक भागमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
अच / इनभ्शन / एपी / आरईएक्स / शटरस्टक
ब्लास्ट उक्त जोडीले उनीहरूको वाको, टेक्सास, सम्पत्तिको लागि अर्को जोडीलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेको रिपोर्ट गरे तर नयाँ घरमालिकहरूले प्रख्यात टिभी घरको लागि कति तिर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन।
लिन्डा कार्टर कस्तो देखिन्छ?
-शयनकक्ष, २-बाथरूम, २,7 29 २ वर्ग फिट घर अविश्वसनीय छ, तर चिप र जोआनाले २०१२ मा घर खरीद गर्दा यो त्यस्तो थिएन। यो स्वाभाविक रूपमा फिक्सर माथिल्लो थियो। अघि र पछाडि घरको छविहरू चित्रित हुन्छन् जोआनको ब्लग ।
यस जोडीले एकपटक डेढ वर्षको खर्च गरे जुन एकपटक जीर्ण भएको घरलाई उनीहरूको मनपर्दोमा फिक्स गर्दै थिए।
क्याटलीन ब्रुसमा फर्किदैछ
'हामी कृषि जीवन र सबै जनावरहरुलाई माया गर्छौं जसले यसलाई आफ्नो घर पनि भन्छ। यो धेरै साहसी भएको छ! ' जोआनाले आफ्नो ब्लगमा २०१ 2014 मा लेखिन्।
यो दम्पतीको लागि परिवर्तनको एक बर्ष भयो। घर बेच्ने र उनीहरूको रियलिटी शोको समाप्ति बाहेक (यसको लोकप्रियताको शिखरमा) पनि जोडीलाई ट्यालोइडहरूले विभाजित अफवाहको सामना गरे।
फ्लिप वा फ्लप प्रेमी तस्वीर
अगस्टमा, विभाजनको रिपोर्टको प्रतिक्रियामा, चिपले ट्वीट गरे कि त्यो 'कहिले पनि हुने छैन।'
पीपल पत्रिकामा कुरा गर्दा चिपले भने, 'केही पनि सजिलो भएको छैन। हामीले यस सुन्दर परिवार र यस फार्मका लागि कडा मेहनत गरेका छौं - यो वास्तवमा अमेरिकी सपना जस्तो देखिन्छ जुन तपाईंले ठूलो हुँदै गरेको सुन्नुभयो। '
उनीहरुका बच्चाहरु र उनीहरुको ब्यवसाय सर्वोच्च प्राथमिकता हो, उनले भने।
'जो र मैले दुबै प्रतिबद्धता गरेका थियौं कि हामी दुबै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चर हो,' उनले भने। 'यदि हामी एक जोडीको रूपमा कसरी सही हुने भनेर पत्ता लगाउन सक्दछौं, तब स्पष्टतः हामीसँग हाम्रा बच्चाहरूका लागि सही हुने अझ धेरै राम्रो अवसर छ।'
केभिन हार्टकी श्रीमतीले उनलाई यौन टेप आरोप लगाउने, जबरजस्ती चोरी गर्ने योजनाको बीचमा हेराइरहेका छन्
बेला थोर्न आफ्नो कन्सर्टको बखत प्रेमी मोड सनसँग स्टेजमा बस्छिन्
einem के एक प्रेमिका छ?
wwe jann caa nikki बेला
केली ओस्बोर्न वजन घटाउने २०१ 2016
phaedra र अपोलो तलाक छ
वेंडी विलियम्स पति केविन शिकारी पेशा